11 “Me de, Mediani+ Dario afe a edi kan mu no, mesɔre gyinae sɛ ne boafo ne ne botan. 2 Enti afei mereka nokwasɛm akyerɛ wo:+ “Hwɛ! ahene baasa foforo bɛsɔre agyina wɔ Persia,+ na nea ɔto so anan+ no benya ahonyade pii asen wɔn a wɔaka nyinaa.+ Na sɛ n’ahonyade ma onya ahoɔden ara pɛ a, ɔbɛhwanyan biribiara atia Hela+ ahenni. 3 “Na ɔhenkɛse bi bɛsɔre, na obedi tumi akɔ akyiri+ na wayɛ nea ɔpɛ.+ 4 Sɛ onya sɔre gyina a,+ n’ahenni no mu bebubu na wɔbɛkyekyɛ mu akɔ ɔsoro mframa+ anan no fam,+ nanso ɛrenkodi n’asefo nsam,+ na ɛrenyɛ sɛ tumi a ɔde dii ade no, efisɛ wobetutu n’ahenni ase ama afoforo, na ɛnyɛ eyinom. 5 “Na anafo fam hene no, kyerɛ sɛ, n’asahene no biako, bɛyɛ den. Ɔno de, obedi obiako no so nkonim, na obedi tumi akɔ akyiri asen tumi a obiako no nyae no. 6 “Mfe bi akyi no, wɔbɛfa wɔn ho yɔnko, na anafo fam hene no babea bɛba atifi fam hene no nkyɛn na wɔayɛ apam. Nanso ɔbea no basa ahoɔden+ no rentena hɔ; ɔhene no ne ne basa nso rennyina, na wobeyi ɔbea no ne wɔn a wɔde no bae, ne nea ɔwoo no, ne nea ɔma ɔyɛɛ den saa mmere no ama. 7 Obi bɛsɔre afi ɔbea no ntini mu duforo+ mu abesi n’ananmu, na ɔbɛba asraafodɔm mu abɛtow ahyɛ atifi fam hene no guankɔbea so, na ɔbɛsɔre atia wɔn adi wɔn so. 8 Afei nso ɔde wɔn anyame,+ wɔn ahoni, wɔn dwetɛ ne sika afɛfɛde, ne nnommum bɛkɔ Egypt. Na ɔbɛtwe ne ho afi atifi fam hene no ho mfe dodow bi. 9 “Ɔbɛba anafo fam hene no ahenni mu na wasan akɔ n’asase so. 10 “Ne mma ani bɛbere na wɔaboaboa asraafodɔm kɛse paa ano. Ɔbɛba abeyiri afa asase no so. Nanso ɔbɛsan akɔ, na ɔbɛwosow ne ho ara akodu ne guankɔbea hɔ. 11 “Na anafo fam hene no ani bɛbere na wafi adi ne no akɔko, kyerɛ sɛ, ɔne atifi fam hene no bɛko. Na ɔbɛma dɔm kɛse asɔre, na wɔde dɔm kɛse no bɛhyɛ obiako no nsa.+ 12 Wɔbɛsoa dɔm no akɔ. Ne koma bɛma ne ho so,+ na ɔbɛma mpem du du atotɔ; nanso ɔremfa n’ahoɔden kɛse no nyɛ adwuma. 13 “Na atifi fam hene no bɛsan aba, na ɔbɛboaboa dɔm kɛse a ɛsen kan de no ano; mmere no awiei, mfe bi akyi no, ɔbɛba, na ɔde asraafodɔm kɛse+ ne nneɛma pii+ na ɛbɛba. 14 Saa mmere no, nnipa bebree bɛsɔre atia anafo fam hene no. “Wo man mu adwowtwafo mma no nso bedi akyiri sɛ wɔbɛma anisoadehu aba mu,+ nanso wobehintihintiw.+ 15 “Na atifi fam hene no bɛba abɛto pempe+ na wafa kurow a wɔabɔ ho ban. Na anafo fam abasa no de, ɛne ne nkurɔfo a wapaw wɔn no nyinaa rennyina; wɔrennya ahoɔden a wɔde begyina. 16 Na nea ɔbɛba no so no bɛyɛ nea ɔpɛ, na obi rentumi nnyina n’anim. Obegyina asase Fɛfɛ+ no so, na ɔde ɔsɛe bɛhyɛ ne nsam aba.+ 17 Ɔde n’ani besi so+ sɛ ɔde n’ahenni nyinaa mu ahoɔden bɛba, na ɔne no bɛyɛ apam,+ na ɔbɛyɛ nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ biara.+ Wɔde mmea babea bɛma no sɛ ɔnsɛe no. Na ɔbea no rennyina, na ɔrenyɛ ne dea bio.+ 18 Na ɔbɛsan de n’ani akyerɛ mpoano nsase+ so na wafa pii. Na ɔsahene bi bɛma n’ahohora afi no so na ama n’ahohora no agyae. Ɔbɛma asan akogu obiako no so. 19 Ɔde n’ani bɛkyerɛ n’asase so guankɔbea, na obehintiw ahwe ase, na wɔrenhu no.+ 20 “Na obi bɛsɔre asi n’ananmu+ a ɔbɛma ɔtowgyeni+ abɛfa ahenni fɛfɛ no mu, na nna kakraa bi no, wɔbɛsɛe no, nanso ɛrenyɛ abufuw anaa akodi mu. 21 “Obi foforo bɛsɔre asi n’ananmu a wobebu no animtiaa,+ na wɔremfa ahenni no mu anuonyam mma no; ɔbɛba asomdwoe bere mu,+ na ɔde adɛfɛdɛfɛsɛm+ begye ahenni no. 22 Na nsuyiri abasa+ no, ne nti wobeyiri afa wɔn so abubu wɔn,+ na wobebubu apam+ no Kannifo+ no nso.+ 23 Esiane sɛ wɔne no bɛfa yɔnko nti, ɔbɛdaadaa nkurɔfo, na ɔbɛsɔre aba, na ɔnam ɔman ketewa bi so bɛyɛ kɛse.+ 24 Asomdwoe bere mu+ na ɔbɛkɔ ahemman no mu baabi a eye, na ɔbɛyɛ nea ne papa ne ne papa papanom anyɛ. Ɔbɛpete afowde ne asade ne nneɛma wɔn mu, na ɔbɛbɔ mmeae a wɔabɔ ho ban ho pɔw bɔne,+ nanso ɛbɛkɔ akosi bere bi. 25 “Ɔde asraafodɔm kɛse bɛkanyan ne tumi ne ne koma atia anafo fam hene no; anafo fam hene no nso ani bɛbere, na ɔde asraafodɔm kɛse a wɔyɛ den boro so bɛba abɛko. Na ɔrentumi nnyina, efisɛ wɔbɛbɔ ne ho pɔw bɔne. 26 Wɔn a wɔne no to nsa didi na wɔbɛsɛe no. “N’asraafodɔm nso, wobeyiri afa wɔn so, na nnipa pii bɛtotɔ. 27 “Na ahene baanu yi koma bɛdan akɔ bɔne ho na wɔatena ɔpon+ biako ho akeka atosɛm.+ Nanso ne nyinaa bɛyɛ ɔkwa,+ efisɛ awiei no bɛba bere a wɔahyɛ no.+ 28 “Ɔde nneɛma pii bɛsan akɔ n’asase so, na ne koma bɛsɔre atia apam+ kronkron no. Ɔbɛyɛ nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ biara,+ na n’asase so na ɔbɛsan akɔ. 29 “Bere a wɔahyɛ+ no mu na ɔbɛsan aba anafo fam,+ nanso akyiri yi de no renyɛ sɛ kan de no. 30 Kitim+ ahyɛn bɛba no so, na ɔbɛbotow. “Ɔbɛsan akɔ, na n’abufuw+ bɛdɛw atia apam+ kronkron no na wayɛ nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ biara; ɔbɛsan akɔ, na ɔde n’ani besi wɔn a wɔagyaw apam kronkron no so. 31 Na abasa befi ne mu asɔre agyina; wobegu kronkronbea,+ guankɔbea no, ho fĩ, na wɔayi daa afɔre+ no afi hɔ. “Na wɔde akyide+ a ɛbɔ ɔman+ no besi hɔ. 32 “Wɔn a wɔyɛ bɔne tia apam+ no, ɔde kasadɛ+ bɛtwetwe wɔn ma wɔawae.+ Na wɔn a wonim wɔn Nyankopɔn+ no de, wobedi nkonim+ na wɔayɛ nea ɛsɛ. 33 Wɔn a wɔwɔ nhumu+ wɔ nkurɔfo no mu no bɛma nnipa pii anya ntease.+ Wobehintihintiw nkrante ne ogya ne nkoasom ne afow ano,+ nna dodow bi. 34 Nanso sɛ wɔma wohintihintiw a, wɔde mmoa kakra bɛma wɔn.+ Na nnipa pii nam adɛfɛdɛfɛ+ so de wɔn ho bɛbɔ wɔn. 35 Wɔbɛma wɔn a wɔwɔ nhumu no bi ahintihintiw+ na ama wɔn nti, wɔayiyi wɔn mu fĩ ahohoro wɔn ho atew wɔn ho fitaa+ akosi awiei bere+ no, efisɛ ɛfa bere a wɔahyɛ no ho.+ 36 “Ɔhene no bɛyɛ nea n’ankasa pɛ, na ɔbɛma ne ho so ahyɛ ne ho anuonyam asen onyame biara;+ ɔbɛka nsɛm akɛse atia anyame mu Nyankopɔn+ no. Na ɔbɛyɛ nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ akosi sɛ abufuw no bɛba awiei,+ efisɛ nea wɔahyɛ no bɛba mu. 37 Ɔremmu ne papanom Nyankopɔn no; ɔremmu mmea anigyede ne onyame foforo biara, na ɔbɛma ne ho so asen obiara.+ 38 Ne dibea mu no, guankɔbea nyame no na ɔbɛhyɛ no anuonyam; onyame a ne papanom nnim no na ɔde sika ne dwetɛ ne aboɔden abo ne afɛfɛde bɛhyɛ no anuonyam. 39 Na obedi ananafo nyame bi akyi ayɛ nea ɔpɛ atia abannennen mu abannennen no. Obiara a obegye no atom no, ɔbɛhyɛ no anuonyam pii, na wama wadi nnipa pii so, na ɔbɛkyekyɛ nsase agye akatua. 40 “Awiei bere no mu no, anafo fam hene+ no ne no bedi apiapia, na atifi fam hene no de nteaseɛnam ne apɔnkɔ ne po so ahyɛn bɛba no so sɛ ahum; ɔbɛba abɛsen afa nsase no so na wayiri afa so. 41 Ɔbɛkɔ+ asase Fɛfɛ+ no nso so, na nsase pii behintiw.+ Na eyinom de, wobefi ne nsam, Edom ne Moab+ ne Ammon mma mu atitiriw no. 42 Ɔbɛkɔ so ateɛ ne nsa wɔ nsase no so, na Egypt+ asase de, ɛremfi mu mfi. 43 Obedi sika ne dwetɛ akorade ne Egypt afɛfɛde nyinaa so. Na Libiafo ne Etiopiafo bedi n’anammɔn akyi. 44 “Nanso ɔbɛtete amanneɛbɔ bi afi apuei+ ne atifi fam, na ɛbɛhaw no,+ na ɔde abufuw kɛse bɛkɔ sɛ ɔrekɔsɛe nnipa pii na watɔre wɔn ase.+ 45 Ɔde n’ahemfie ntamadan besi ɛpo kɛse no ne asase Fɛfɛ+ no bepɔw kronkron no ntam, na ɔbɛba ara abedu n’awiei,+ na ɔrennya ɔboafo biara.+